कहिल्यै १२ नबज्ने दुनियाँको एकमात्र घडी ! खास कुरा थाहा पाउनुभयो भने तपाईं झनै अचम्ममा पर्नुहुनेछ…. onlinedarpan.com
Friday 21st of January 2022 / 02:09:26 PM
१२ अंकलाई धेरैले अशुभ मान्दछन् । कसैलाई दशा लाग्दा वा आपत पर्दा मेरो त बाह्र बज्यो भन्छन् धेरै मान्छेहरु । बाह्र बजेको समय पनि धेरैले अशुभ काल ठान्छन् र कतै यात्रा गर्दा बाह्र बजेको समय छल्ने गर्दछन् । तर जति छले पनि एक दिन अर्थात् २४ घण्टामा २ पटक त बाह्र बजेरै छाड्छ घडीमा ।घडीमा बाह्र बज्नु प्राकृतिक नियम नै हो । तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो घडी छ जसमा कहिल्यै १२ बज्दैन । यो घडीमा किन बाह्र बज्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने तपाईं झनै अचम्ममा पर्नुहुनेछ ।
हो, स्विजरल्याण्डको सोलोथर्न सहरस्ति टाउन स्क्वाएरमा एउटा घडी छ । उक्त घडीमा कहिल्यै पनि बाह्र बज्दैन किनकि घडीमा केवल ११ वटामात्र अंक छन् । घडीमा १२ अंक गायब छ । त्यहाँसँगै रहेका अरु घडीमा पनि बाह्र बज्दैन । यो सहरको अर्को विशेषता भनेको यहाँका मानिसहरुमा ११ अंकप्रति विशेष लगाव छ । यहाँका जुनसुकै चिजको डिजाइन ११ अंकको आसपासमै घुम्ने गरेको छ । सहरमा चर्च तथा च्यापेलको संख्या पनि ११–११ रहेको छ । त्यसका अलावा संग्रहालय, ऐतिहासिक झरना तथा टावर पनि ११ नम्बरकै रहेका छन् ।
सहरमा रहेको सेन्ट उर्सुस चर्चमा पनि ११ अंकको महत्व प्रष्टसँगै देख्न पाइन्छ । यो चर्च ११ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । त्यहाँ ३ वटा सिँढीको सेट छ र हरेकमा ११ वा पंक्ति रहेका छन् । साथै चर्चमा ११ वटा ढोका र ११ वटा घण्टी रहेका छन् । सहरबासीहरुमा ११ नम्बरसँग यतिधेरै लगाव छ कि बालबालिकाहरुको ११ औँ बर्थडे विशेष रुपमा मनाउँदछन् । त्यस अवसरमा दिइने उपहारहरु पनि ११ अंकसँग विशेष सम्बन्धित रहेका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा